Life ifilosofi Schopenhauer futhi Nietzsche
Philosophy zokuphila - kuba endaweni ethandwa, okuyinto eyaba khona ekupheleni kwekhulu le-19. Yiziphi izici zawo eziyinhloko? Life, ngokuvumelana lesi siqondiso zefilosofi - inhlanganisela eziningi izici. Ongqondongqondo Nginakile, kuse ecaleni ngokwengqondo nezinto eziphilayo, futhi amasiko nenhlalo zokuphila.
Esinye sezici ezibaluleke kakhulu emisebenzini ngabameli ezindaweni ezifana ifilosofi yokuphila - Kutama ukucabanga ngokuba khona muntu yaphelela futhi isiqalo nesigcino yonke imininingwane. Ongqondongqondo uzamile ukuba bamukele wonke umuntu, wokufunda incazelo yalo. Kakhulu zefilosofi owaziwa ukusebenza kulesi siqondiso - kuyinto Nietzsche futhi Schopenhauer. Masizame bahlanganise amalungiselelo eziyisisekelo enzuzweni yomshikashika wabo.
Singasho ukuthi ifilosofi yokuphila Schopenhauer sika ngempela engenathemba. ongqondongqondo Omkhulu ukholelwa ukuthi ukuba khona abantu futhi isizathu - kuyinto imiqondo engahambelani. Isazi sefilosofi akakholelwa kuyaqhubeka. Wabhala ukuthi zonke ekuphileni kwabantu mkhulu kuncike kungekho izisusa ngokusesilinganisweni, futhi lokho okubizwa ngokuthi inkululeko yokuzikhethela. Iyini intando ka Schopenhauer? Uma uchaze kancane, kuba isazela eziyisisekelo obusa umuntu ukulondoloza impilo kumnyama kubomvu. It siyofezwa othandweni ezithile. Ngokuyisisekelo isidingo amandla, uthando nokunye. Kufanele kuphawulwe ukuthi intando nakanjani abayizimpumputhe. Akukhona kuncike imithetho enengqondo.
Schopenhauer wayekholelwa ukuthi uma nje kukhona lolu Isifiso sokuphila okuyisa abantu okungenanzuzo nezenzo okungelona usizo, lonke khona eqinisweni lutho futhi ayihlelekile. Liyini ikhambi inikeza sazi adumile? nefilosofi Schopenhauer sokuphila wukuthi abantu kumele baqonde isidingo yokushiya ukholo. Kuphela kuleli cala, ukuphila kwakhe ngeke kuncike isazela kanye ngabanye bayothola inkululeko yangempela. Ungasondela isifaniso nezimfundiso lasendulo ezingaqondakali, okuyinto wawuthi injongo yokuphila komuntu ingafika Nirvana. Futhi isazi sefilosofi kanye ucingo ohlakaniphile omkhulu ukulahla izwe luyakhohlisa, okuyinto subordinated ukuze imizwelo engokwemvelo.
Irrationalism ka Schopenhauer ekhungethe abadumile sefilosofi Nietzsche. Ifilosofi ukuphila ke lihlabelela isiqhwaga owakwazi izakhe uqobo. Nietzsche uvakashele abakhileyo, ukukhathazeka kwabo izinto ezincane kanye ukucabanga ejwayelekile. Wahlabelela liculo lesive Superman, okuyinto kude le mihlangano, iziphathimandla kanye nemibono yomphakathi. Kuyaphawuleka ukuthi Nietzsche naye okukhulunywe ngaye emibhalweni yakhe, njengoba umnyombo umuntfu lakhetsa kuphila ngato. Nokho, kuwufanele ukwenza kwalokho encane. Ngaphansi intando wesazi sefilosofi kwakusho isifiso zidonse isikhathi eside. Ngomqondo othile, lokhu yokuthi Nietzsche wayephikisa nokuziphatha kobuKristu. Isazi sefilosofi wayekholelwa ukuthi inkolo kwenza abantu baba izigqila. Kuyini isitatimende sakhe ukuthi kuphela lapho uNkulunkulu efa, le ndoda agcine ekhululiwe. Nietzsche wahlabelela umbusi, umbusi ukuphila, engesiyo kuncike kunoma ubani noma yini. Akufanele sicabange ukuthi isazi sefilosofi wayethambekele ekubhekeni nihilism. Nietzsche waphawula emibhalweni yakhe ukubaluleka ukucabanga ezimele okunengqondo, ulwazi lomuntu siqu zokuphila. Umcabangi babekholelwa ukuthi umuntu ngamunye akwazi zifezeke izimiso yabo khona, kunokuba athathe ulwazi kanye nemithetho ukuthi ophoqelelwa kusukela ngaphandle. Nietzsche wabhala ukuthi Superman - kuyinto esivelele lapho ubophekile ukufuna zonke Umuntu ocabangelayo
Uma unesithakazelo kulesi siqondiso, njengoba ifilosofi yokuphila, ukuze kangcono bese uqedela ukuqonda kwakhe udinga ukufunda imisebenzi abalobi abaningi. Kuyaphawuleka ukuthi amalungiselelo eyinhloko ongqondongqondo kungaba buhluke kakhulu nomunye. Naphezu kweqiniso lokuthi zefilosofi wasebenza luhamba luye ohlangothini olulodwa, ngamunye wabo umbono ayo zezwe futhi indima yomuntu kwi-ke.
Nefilosofi Russian kwekhulu le-19: imibono, indima yabo futhi ukubaluleka
Amazwi Clever ngokuphila. Izitatimende mayelana nenjongo yokuphila
Umuthi 'Filtrum Ste ": ukubuyekezwa, ukwakheka, izici
Umqondo Market. isakhiwo sayo nezinhlobo
Kungani ukuphrinta? Yini okumelwe uyenze?